Why Ogaden is so unfortune NOT TO BE FREE @2014 - SomaliNet Forums
Why Ogaden is so unfortune NOT TO BE FREE @2014
Postby soohorgeela » Sun Jun 22, 2014 3:18 pm
Cidna isma waydiiso waxa Ogadenia ooga nasiib darantahay wadamada xoroobay ee africa? sababta oogu horaysa waxaa weeye iyada oo daris la ah wadamadii waxa guumaysan jiray oo ah ETHIOPIA. Ta labaad waxay daris la tahay wadan kale oo Somalia la yidhaahdo aaminsana in OGADEN ay tahay gobol Somalia ka mid ah aamin-sana ama cadyohow ku cunay ama ku ciideeyay? marka OGADENIA waxay u dhaxaysaa laba wadan oo caalamka caanka ka ah, midna FAQIIR nimo ku caan baxay, midka kalena FAWDO iyo QAS. Hadii dhulka la raran karo OGADENIA waxaan la tagi lahayn meel u dhaxaysa INDONESIA iyo NEWZEALAND.
Guba Silsila continuation Ogaden poets 2014
by Khalid Ali » Thu Jun 26, 2014 11:48 pm » in Politics - Somaliland
STAND UP AND SPEAK UP FOR FREE OGADEN
by tightrope » Sun Sep 11, 2011 7:16 pm » in General - General Discussions
Wahabi threat to mekkah and free ogaden?
by mcali » Mon Nov 04, 2013 6:56 pm » in General - General Discussions
Somali people must do Jihad to free somalia and Ogaden
by galia » Wed May 23, 2007 2:28 pm » in General - General Discussions
Wed May 23, 2007 3:01 pm
Oromos, Ogaden, Islamic courts,Free MPs and Jaliyada front
by Lacageylacag » Sat Jun 09, 2007 6:46 am » in General - General Discussions
Sat Jun 09, 2007 8:44 am